Mid ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxii Nairobi oo ku geeriyooday Isbitaalka Kenyata - Sabahionline.com
Mid ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxii Nairobi oo ku geeriyooday Isbitaalka Kenyata
Qof ka mida dadkii ku dhaawacmay qarixii ka dhacay Waddada Moi ee Nairobi biloowgii todobaadkan ayaa arroortii Khamiista (31-ka May) dhaawicii ugu dhimatay isbitaalka Qaranka ee Kenyatta, sidaana waxa sheegay idaacadda Capital FM ee Kenya.
Kenya oo bixinaysa qarashka caafimaad ee dhibbanayaashii qaraxa ku dhawacmay
Geerida dadkii ku dhintay weerarkii astaanka basaska ee Nairobi oo 9 gaartay
Shaqaaqooyin ka biloowday Eastleigh, iyo tirada dhimashada qaraxii baska oo gaartay 7
Bilayska Kenya oo al-Shabaab ku eedeeyey weerarkii baska Nayroobi
Haweenaydan oo aan magaceeda la sheegin ayaa waxa ay ka gubatay korka, waana qofkii ugu horreeyay ee ka dhinta dadka dhaawacmay.
Weerarkii Isniintii ka dhacay Assanand House ayaa waxa ku dhaawacmay 38 qof. Isbitaalka Qaranka ee Kenyatta ayaa laga saaray 23 qof oo ka mida 38-aa qof ee ku dhaawacmay qarixii Isniintii.
June 1, 2012 @ 04:25:21PM
Aniga waxay ila tahay dawlada Kenya waxa ku waajib ah inay qaado masuuliyada sababtoo ah wax tallaabooyin ah ma aysan qaadin si ay u hubiyaan in muwaadiniintu aysan khatar ugu jirin dhacdooyinkaas oo kale, waayo tani maaha markii ugu horraysay ee ay dhacdo, oo marar badan oo hore ayuu arrinkan oo kale u dhacay. Markastana waxa la beegsanayay muwaadiniinta, markaa waxa la joogaa waqtigii ay dawladu dhabarka u ridan lahayd masuuliyadeeda.